सहानुभुतिमा पनि कम्तिमा ९० हजारले किन पत्याइरहेका छैनन्, नेपाली कांग्रेस ?
काठमाडौं, २७ मंसिर । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई मतदाताले पत्याएनन् । प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा तेस्रो बनाइएको कांग्रेस समानुपातिक मतमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रभन्दा निक्कै अघि छ । तर, उसले नेकपा एमालेको आँकडालाई भ्याउन सकेको छैन ।
खासगरी समानुपातिक मतलाई सहानुभुतिको मत पनि भनिन्छ । ९६ घन्टादेखि एमालेभन्दा ९० हजार मतले पछि परिरहेको कांग्रेसले मतान्तर कम बनाउन सकेको छैन । बरु, प्रारम्भिक चरणमा उस्तै उस्तै देखिन खोजेको उसको मत केही घन्टा वित्दा नै निक्कै फराकिलो हिसाबमा पछि परेको छ ।
यो मतान्तरमा धेरै समयसम्म पनि उस्तै परिणाम बाहिर आइरहेका छन् । अहिले रातीसम्मको मत परिणाम हेर्ने हो भने ९० हजार मतले एमालेभन्दा पछि छ, कांग्रेस । साढे नौ बजेसम्मको आँकडालाई लिँदा एमालेले २४ लाख कटाएको छ भने कांग्रेस २३ लाख केही हजारमा सीमित छ । कांग्रेसको जीवन यहि जनमतले विश्लेषण गर्दा ९० हजार जनता किन कांग्रेस पत्याउन सक्षम भएनन् ? जबकि, एमाले कांग्रेसभन्दा एमाले यसअघि असरदार जनमतमा देखिएको थिएन ।